သျှမ်းပြည်နယ် ဒေသခံများ၏ လယ်ယာခြံမြေများအား တရုတ်နိုင်ငံ ဘက်ခြမ်းသို့ ကျူးကျော်သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသ ဖြင့် ဒေသခံများမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး နယ်ခြားတိုင် ဆွဲနုတ် မီးရှို့ဖျက်ဆီး
တရုတ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးဌာန နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေး ဌာန တို့ပူးပေါင်း
၃.၆.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၀၉၂၀အချိန် တာမွေမြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန် လမ်းအတိုင်း တာမွေမြို့နယ်ဘက်မှ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ဘက်သို့ ပဲခူးမြို့နယ်နေ ယာဉ်မောင်း အောင်ကိုဝင်း မောင်းနှင်လာသော ၄ခ/--- နစ်ဆန်းဒီဇယ်၊(၈၈)သန်မြန်သူ ယာဉ်လိုင်းခရီးသည်တင် ယာဉ်သည် မင်းရဲကျော်စွာ ဂုံးတံတားအတက် အရောက်တွင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ၎င်း၏ရှေ့မှ မောင်းနှင်သော ၃ဂ/--- ဆူဇူးကီး ပစ်ကပ်ယာဉ်အား တိုက်မိခဲ့ပါသည်။
၃ဂ/---ဆူဇူးကီးပစ်ကပ်ယာဉ်သည် အတိုက်ခံရသည့်အရှိန်ဖြင့် ၎င်း၏ရှေ့မှမောင်းနှင်သော AA---ဆူဇူးကီးဝက်(စ်)ဂွန်ယာဉ် လည်းကောင်း၊ AA---ဆူဇူးကီးဝက်(စ်)ဂွန်ယာဉ်မှ ၇ဃ/----မတ်တူး
ဆလွန်း ယာဉ်အားလည်းကောင်း၊ ၇ဃ/----မတ်တူးဆလွန်းယာဉ်မှ BB---အေဒီဗင်ယာဉ်အားလည်းကောင်း ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ တိုက်မိ ခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ယာဉ်မဆင်မခြင်မောင်းနှင်သူ ယာဉ်မောင်းအောင်ကိုဝင်းအား တာမွေမြို့မရဲစခန်း ယာဉ်(ပ)၂၇/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂၇၉ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
၂.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၄၀၀ အချိန်ခန့်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ (၂၀)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ရန်နိုင်လမ်းရှိ စားသောက်ဆိုင်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ရခိုင်(ခ)ကျော်အောင်သန်းမှာ သူငယ်ချင်း(၂)ဦးနှင့်အတူ အရက်သောက်နေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစဉ် ငလွင်(ခ)ကိုသန်းလွင်ရောက်ရှိ လာခဲ့ရာ ၁၀၀၀ အချိန်ခန့်က (၂၀)ရပ်ကွက်ရှိနာရေးတစ်ခု၌ မုန့်ဟင်းခါးအိုး သယ်ရာတွင် ၎င်းတို့(၂)ဦး တိုက်မိခဲ့သည့်ကိစ္စအား ရခိုင်(ခ)ကျော်အောင်သန်းမှ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ငလွင်(ခ)သန်းလွင်ကို ဘီယာ ပုလင်းနှင့် ရိုက်မည်ပြုသဖြင့် စကားများခဲ့ကြကြောင်း၊ ထိုသို့စကားများစဉ် ဆိုင်ရှင်ဖြစ်သူမှ ဖျန်ဖြေပေးခဲ့၍ ငလွင်(ခ)ကိုသန်းလွင်မှာ ဆိုင်အတွင်းမှ ပြန်ထွက်သွားခဲ့ရာ ရွှေလမင်းလမ်းသို့အရောက်၌ ရခိုင်(ခ) ကျော်အောင်သန်းမှာ နောက်မှလိုက်သွားပြီး အရိုး၊ အသွား(၁၀)လက်မခန့်ရှိ ၀က်အူလှည့်ဖြင့် ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် ငလွင်(ခ)ကိုသန်းလွင်မှာ နောက်ကျောထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်ရရှိခဲ့ပြီး လှိုင်သာယာဆေးရုံသို့ပို့အပ်စဉ် သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းကို သေဆုံးသူ၏ညီဖြစ်သူ ကိုမျိုးအောင်မှ တိုင်တန်းလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။
တိုင်တန်းချက်အရ သောင်ကြီးနယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၃၇၆/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ရခိုင်(ခ)ကျော်အောင်သန်း၊ (၄၀)နှစ်၊ (ဘ)ဦးအောင်သိန်းညွန့်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေသူအား ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုများ မကြာခဏ ဖြစ်ပွားနေသော ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၁၅ လမ်းဘေး တစ်လျှောက်တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အစိုးရဌာနဆိုင်ရာများ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ သိမ်းဆည်းခဲ့သော လယ်ယာမြေများအတွက် ဖြူးမြို့နယ် ဒေသခံ တောင်သူများက တောစောင့်နတ်၊ တောင်စောင့်နတ်နှင့် မြေစောင့် နတ်မင်းကြီးတို့က မြေယာသိမ်းဆည်းသူများကို အပြစ်ပေး ဒဏ်ခတ်ပေးရန် ဆုတောင်း ကျိန်စာတိုက်ပွဲကို ဇွန်လ ၁ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း အဆိုပါပွဲကို ဦးဆောင်ကျင်းပသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တောစောင့်နတ်၊ တောင်စောင့်နတ်များကို အမြန်းလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် ၁၁၅ နံဘေးရှိ ညောင်ပင်တွင် ပူဇော်ပွဲထိုးပြီး မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီတွင် သိမ်းဆည်းခံ တောင်သူများ ကိုယ်တိုင် အဆိုပါ လယ်မြေများသည် မိဘဘိုးဘွားစဉ်ဆက် ဓားမဦးချ လုပ်ကိုင် စားသောက်ခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ပါကြောင်း ကတိသစ္စာ တိုင်တည်ပြီး မြေသိမ်းသူများကို ကျိန်စာတိုက် ဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ် တစ်ဝိုက် အမြန်လမ်း တည်ဆောက်စဉ် အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ အရာခံအဆင့် တပ်မတော်သားတစ်ဦးက အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ လယ်ယာမြေ ၂ ဒသမ ၂၂ ဧက သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသူ ဒိုင်းတရာ ကျေးရွာနေ ဒေသခံတောင်သူ ဦးဝင်းကိုက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြသလို သူတို့လည်း ကျွန်တော်တို့ကို မတရားလုပ်တဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် ကုန်းသွားရင် ကုန်းဘေး၊ ရေသွားရင် ရေဘေးတွေ့ပါစေ ဆိုတာကို ဆုတောင်း ကျိန်စာတိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်ကို ယုံကြည်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက အမြန်လမ်း တည်ဆောက်ရာတွင် သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် လယ်ယာမြေများအတွက် လယ်တစ်ဧက ငွေကျပ် ၄၀၀,၀၀၀ နှုန်းဖြင့် နစ်နာကြေးပေးရန် ကမ်းလှမ်းထားပြီး ဒေသခံတောင်သူများက ကျောက်တံခါးမြို့နယ်အတွင်း ပေးလျှော်သည့် တစ်ဧက ငွေကျပ် ၁၂ သိန်းအတိုင်း ပေးရန် တင်ပြထားသည်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ရှောင်လွှဲနေကြောင်း ဒေသခံတောင်သူများက ဆိုသည်။
သို့သော် တောင်သူ ၈၆ ဦး အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သော အဆိုပါ သိမ်းဆည်းခံ မြေဧက ၁၃၃ ဒသမ ၆၂ ဧကအတွက် နစ်နာကြေးငွေ ၅၃,၄၄၈,၀၀၀ ကျပ် (ငါးရာ သုံးဆယ့်လေးသိန်း လေးသောင်း ရှစ်ထောင်ကျပ်) ကို ထုတ်ယူခြင်း မရှိပါက ဥပဒေနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးတွင် ပြန်လည်အပ်နှံရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်က ညွှန်ကြားထားကြောင်း ဖြူးမြို့နယ် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဖြူးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသန်းအောင်က လယ်သမားများထံ ထုတ်ပြန်ထားသော အကြောင်းကြားစာအရ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့မှာ လုပ်ကိုင် စားသောက်စရာ လယ်ယာမြေလည်း မရှိတော့ဘူး။ နစ်နာကြေးလည်း မရရှိဘူး။ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွှန့်လှိုင်ကလည်း လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးပေမယ့် လက်ရှိအထိ မထူးခြားတော့ အခုလို ကျိန်စာတိုက်တဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်ချင်ဘဲ လုပ်ရတာပါ” ဟု လယ်ယာမြေ ရှစ်ဧကနီးပါး သိမ်းဆည်းခံထားရသူ ဦးထွန်းခင်က ဆိုသည်။
ဖြူးမြို့နယ် မင်းဂံရိုးကျေးရွာအုပ်စု ဒိုင်းတရာကျေးရွာအနီး လယ်ယာမြေများသည် ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း တည်ဆောက်အချိန်၌ လမ်းမြေတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ရုံဆောက်လုပ်ရန် သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် အမြန်လမ်း ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် လယ်ယာမြေ သိမ်းဆည်းခံခဲ့ရသည့် အပြင် နောက်ပိုင်း အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် လယ်ယာမြေ ဧကပေါင်း ၁၀၀၀ နီးပါး ရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်သုံးခွမြို့ အမှတ် ၈ ရပ်ကွက် ဗန္ဓုလလမ်း အမှတ်မရှိ နေအိမ်၌ ဇွန် ၂ ရက်မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်က အမျိုးသမီးတစ် ကြိုးဆွဲချသေဆုံးနေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ယင်းဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းကြည့်ရာ သုံးခွမြို့မရဲစခန်းတွင် တာဝန်မှူး ဒုရဲအုပ်မျိုးသန့်ဇင် ဦးစီးအဖွဲ့က သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ သေဆုံးသူမှာ ၄င်းနေအိမ်နေ မသန်းသန်းမော်-၂၇-နှစ် (ဘ) ဦးတင်ငွေ (ကျဘမ်း) ဖြစ်ပြီး နေအိမ်အတွင်း ၆-ပေအမြင့်ခန့် ထုတ်တန်း၌ ပလပ်စတစ်ကြိုး သုံးပဲလုံးခန့် အရှည် ၄ ပေခွဲခန့်ဖြင့် ကြိုးဆွဲချ သေဆုံး နေကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရပြီး အလောင်းအား သုံးခွမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ပေးပို့အပ်ခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သုံးခွမြို့မရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၁၄) ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ပြီး ဓမ္မတာအတိုင်း သေဆုံးခြင်း ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်းသိရသည်။
သုံးခွ ဇွန် ၂
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၆၅ နှစ်အရွယ်တို့တွင် ထက်ဝက်ခန့်မှာ ခံတွင်းကင်ဆာ ခံစားနေရ ကြောင်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏ စာရင်းများအရ သိရသည်။
ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းများတွင် ကွမ်းစား သုံးခြင်း၊ ဆေးလိပ် သောက် သုံးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ကွမ်း တစ်မျိုးတည်း စားသုံးသူ ၁ဝဝ တွင် ၃၄ ဦးနှုန်းဖြင့် ခံတွင်းကင်ဆာ အများဆုံးဖြစ်နေပြီး ဆေးလိပ်နှင့်ကွမ်း နှစ်မျိုးလုံးသုံးစွဲ သူ ၁ဝဝ တွင် ၂၂ ဦးနှုန်း၊ ဆေးလိပ်တစ်မျိုးတည်း သုံးစွဲသူ ၁ဝဝ တွင် ၁၉ ဦးနှုန်း ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရသည်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးတို့၏ အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပညာပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီး ပြည်သူ့ ဆေးရုံများ ၌လည်း ဆေးလိပ်နှင့် ကွမ်းယာ သုံးစွဲခြင်းကို ဖြတ်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
''ဆေးရုံတွေမှာတော့ ဆေးလိပ်၊ ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောပွဲတွေ အမြဲတမ်းလုပ်ပါတယ်။ နယ်တွေမှာလည်း သွားလုပ်ဖြစ်ပါတယ်''ဟု အင်းစိန် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး (ဆေးပညာ) ဒေါက်တာ ဒေါ်တင့်တင့်ကြည်က ပြောကြား သည်။ ဆေးလိပ်တွင် အဆိပ်သင့်စေသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် နီကိုတင်းအပြင် ဖော်မလင်ဆေးရည်၊ သန့်စင်ခန်းသုံးဆေး၊ ကြွက်သတ်ဆေး၊ လက်သည်းဆိုး သန့်စင်ဆေး၊ ကားမောင်းလျှင် ထွက်သော ဓာတ်ငွေ့၊ မီးခိုးငွေ့၊ ကတ္တရာဆေးချေး၊ အိမ်သုတ်ဆေး၊ ဓာတ်မြေသြဇာတွင် ပါဝင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းတို့ ပါဝင်သဖြင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားစေ ကြောင်းကိုလည်း သိရသည်။ ကွမ်းစားရာတွင် ပါဝင်သည့် ဆေးရွက်ကြီးကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ အဓိက ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ ခံတွင်းကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုသည် အမျိုးသားများတွင် အဖြစ်များကြောင်း သိရသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများတွင် အမျိုးသား ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး ၁ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဆေးလိပ်နှင့် ဆေးရွက်ကြီး တစ်မျိုးမျိုးကို သုံးစွဲ နေကြကြောင်း (WHO) ၌ ဖော်ပြ ထားသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တဖက်ကမ်း ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြိ်ု့မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၁၆၃ ဦးကို ထိုင်းစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးပါတယ်။
မဲဆောက်အခြစိုက် စစ်တပ်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ နယ်ခြားစောင့်ရဲ တပ်ဖွဲ့တွေ ပါဝင်တဲ့ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာ ဒီမနက်အရုဏ်မတက်ခင်မှာ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေ အများဆုံးနေထိုင်ကြတဲ့ မဲဆောက်မြို့ ဘန့်ဆောင်ခွဲရပ်ကွက်ထဲမှာ ၀င်ရောက်ရှာဖွေပြီး တရားမ၀င်နေထိုင်သူတွေကို ဖမ်းဆီးသွားတာပါ။
ဖမ်းဆီးခံရသူ စုစုပေါင်း ၁၆၃ ဦးထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ကျား ၄၉၊ မ ၅၉ နဲ့ ကလေး ၅၅ ယောက် ပါဝင်ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးထားသူတွေကို နယ်ခြားသောင်းရင်းမြစ်မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံ မြ၀တီဘက်ကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ကိုလက်ခံထားတဲ့ ထိုင်းအိမ်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့ နေထိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့ မြေပိုင်ရှင်တွေကို ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမယ်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အလားတူ ဖမ်းဆီးမှုတွေကို တခြားရပ်ကွက်တွေမှာ ပြုလုပ်သွားဦးမယ်လို့ ထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက ပြောပါတယ်။
မဲဆောက်မြို့နယ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ သိန်းလောက် နေထိုင်ကြတယ်လို့ မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စစ်တမ်းအရ သိရပါတယ်။
ဆရာ မိသားစုတစ်ခုမှာ မိမိရဲသွေး ဟုတ်-မဟုတ် ဝေဝါးနေပါတယ်။ ဘယ်လိုစစ်ရင်သိနိုင်မလဲဆရာ။ အသက်က ၂၈ ပါ။
(၁) Paternity Determination by Blood Type သွေးအုပ်စုကိုကြည့်ပြီး မိဘ စစ်-မစစ်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ စမ်းသပ်ရန်ဇယားနဲ့ အကြမ်းဖျင်းသိနိုင်မယ်။
(၂) DNA testing မျိုးဗီဇစမ်းခြင်းနဲ့ တိတိကျကျသိနိုင်တယ်။
(၁) Paternity Determination by Blood Type သွေးအုပ်စုကိုကြည့်ပြီး မိဘ စစ်-မစစ်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေ စမ်းသပ်ရန်ဇယား
မိဘသွေးအုပ်စု A + A = ကလေးသွေးအုပ်စု A, O
မိဘသွေးအုပ်စု A + B = ကလေးသွေးအုပ်စု A, B, AB, O
မိဘသွေးအုပ်စု A + AB = ကလေးသွေးအုပ်စု A, B, AB
မိဘသွေးအုပ်စု A + O = ကလေးသွေးအုပ်စု A, O
မိဘသွေးအုပ်စု B + B = ကလေးသွေးအုပ်စု B, O
မိဘသွေးအုပ်စု B + AB = ကလေးသွေးအုပ်စု A, B, AB
မိဘသွေးအုပ်စု B + O = ကလေးသွေးအုပ်စု B, O
မိဘသွေးအုပ်စု AB + AB = ကလေးသွေးအုပ်စု A, B, AB
မိဘသွေးအုပ်စု AB + O = ကလေးသွေးအုပ်စု A, B
မိဘသွေးအုပ်စု O + O = ကလေးသွေးအုပ်စု O
(၂) DNA testing မျိုးဗီဇစမ်းခြင်း
DNA testing မျိုးဗီဇစမ်းတာကို ဆေးစာမှာ DNA profiling လဲခေါ်တယ်၊ DNA typing လဲခေါ်တယ်၊ Genetic Fingerprinting လဲခေါ်တယ်။ Forensic Science မှုခင်း-ဆေးပညာရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှာပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ DNA Makeup ကို ကြည့်ပြီး သူဘယ်သူဆိုတာ သိနိုင်လို့ Identifier ခေါ်တယ်။
နောက်ဆေးစစ်နည်းတခု ဖြစ်တဲ့ Full Genome Sequencing ဆိုတာနဲ့ မတူပါ။ လူတဦးနဲ့တဦး DNA sequences တွေဟာ ၉၉့၉% တူကြပေမဲ့ Monozygotic twins အသွင်တူ-အမွှာကလွဲရင် ကွဲပြားတာကို ခွဲခြားလို့ရတယ်။ DNA profiling technique နည်းကို ၁၉၈၄ ခုမှာ အင်္ဂလန် ပညာရှင်ကနေ စတွေ့ခဲ့တယ်။ DNA profiling process ကို အများဆုံးသုံးတာက Buccal swab ပါးစောင်က သွားရည်ကို ဂွမ်းစနဲ့ သုတ်ယူပြီး စမ်းပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ TV channels တီဗွီကြည့်ခွင့်ရတဲ့သူတွေ အီရတ် ခေါင်းဆောင် ဆဒမ်-ဟူစိန်ကို ဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာ မီးထိုးထားပြီး ပါးစပ် ဟပေးနေရတဲ့ပုံကို မြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။
Blood သွေး၊ Saliva သွားရည်၊ Semen သုတ်ရည်၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား (သွားပွတ်တံ၊ မုတ်ဆိတ်ရိပ်ဒါး) တနေရာရာကနေ ရနိုင်တဲ့ Fluid အရည်၊ Tissue (တစ်ရှူး) ကိုလဲ စစ်ဆေးနိုင်တယ်။ RFLP analysis, PCR analysis, STR analysis နဲ့ AmpFLP နည်းတွေ ရှိတယ်။ အမေ-အဖေ စစ်မစစ် စမ်းတာကို DNA family relationship analysis ခေါ်တယ်။
အမေ-အဖေ၊ ဆွေမျိုး စစ်-မစစ် စမ်းတာကို DNA Family Relationship Testing ခေါ်တယ်။ ဆေးစာနဲ့ပြောရရင် Polymerase Chain Reaction (PCR) နည်းပညာလို့ ခေါ်တယ်။ Paternity ဖခင်၊ Maternity မိခင်၊ Siblingship အမျိုး တော်တာကို အတိအကျ စစ်နည်း ဖြစ်တယ်။
လူတွေမှာ သန္ဓေတည်ကတည်းက သီးသန့် DNA molecules (ဒီအင်န်အေ-မော်လီကြူး) ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အဖေအစစ်ရဲ့ Sperm cell (သုက်ပို)း နဲ့ အမေအစစ်ရဲ့ Egg cell (မျိုးဥဆဲလ်) တွေကနေ တူညီတဲ့ အရေအတွက်ရှိတဲ့ DNA ပေါင်းစပ်ပြီး Zygote (ဇိုင်ဂုတ်) ခေါ်တဲ့ သန္ဓေတည်စေတယ်။ ရတာမျိုးက တသက်လုံး ပါနေမယ်။ ဘယ်တော့မှလဲ မပြောင်းတော့ဘူး။ စစ်မစစ် စစ်ရင် Buccal swabs ပါးစောင်က သွားရည်ကို ဂွမ်းစနဲ့သုတ်ယူတာ၊ Blood သွေး၊ Body liquid အရည်တွေနဲ့ Tissue samples (တစ်ရှူး) အမူနာတွေကိုရယူ စမ်းသပ်နိုင်တယ်။
DNA တိုင်းမှာ Coding information (ကုတ်) ပါတာနဲ့ Non-coding genetic material (ကုတ်) မပါတာ ၂ မျိုး ရှိတယ်။ မပါတာကို Junk DNA ခေါ်လေ့ရှိပြီး Individual identification ဘယ်သူ-ဘယ်ဝါ ခွဲခြားရာမှာ သုံးရတယ်။ လူတိုင်းမှာ မတူထူးခြားတဲ့ Unique genetic profile ရှိတာမို့ ခွဲလို့ရတယ်။ သတ်မှတ်ပေးနိုင်တဲ့ DNA Marker (မတ်ကာ) ၅ မျိုး သုံးတယ်။ D21S11, D7S820, TH01, D13S317 နဲ့ D19S433 တွေဖြစ်တယ်။ အမေ၊ အဖေ နဲ့ ကလေးတို့ရဲ့ အဲဒီ ၅ မျိုးကို စစ်လိုက်ရင် အဖေဟုတ်-မဟုတ်၊ အမေဟုတ်-မဟုတ် သိလာတော့တယ်။ စုံစေ့အောင်စစ်ရင် ၁၃ မျိုးအထိရှိတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အဆုံးသတ် အဖြေထုတ်တယ်။ Biological father ဟုတ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး သိလာမယ်။
DNA Test Applications စမ်းနည်းကို
1. Relationship DNA Testing ဆွေမျိုးစစ်တာ၊
2. Genetic Disease Testing ရောဂါစစ်တာ၊
3. Genealogy DNA Testing ဗီဇသမိုင်းကြောင်းစစ်တာ၊
4. Family Tree DNA ဆွေမျိုးစဉ်ဆက် လိုက်ရှာတာတွေအတွက် သုံးတယ်။
Rates of non-paternity အဖေ-မစစ်နှုန်းဟာ ဝ့၈% ကနေ ၃ဝ% အထိ ရှိတယ်လို့ ၂ဝဝ၅ စစ်တမ်းတခုက ဆိုပါတယ်။
• အင်္ဂလန်မှာ ယောက်ျား ၁၆၇၈ ယောက်ကို စစ်ရတာမှာ ၁-၂% ရှိတယ်။
• မက်စီကိုမှာ ကလေး ၃၉၆ ယောက်ကို စစ်တာမှာ ၉့၈% ကနေ ၁၃့၈% ရှိတယ်။
• ဆွစ်ဇလန်မှာ ဝ့၃% ကနေ ၁့၃% ရှိတယ်။
• အမေရိကားမှာ (မစ်ချိဂန်) မယ် အဖြူကလေး ၁၄၁၇ ယောက်နဲ့ အမဲကလေး ၅၂၃ ယောက်ကနေ ၁့၎% ကနေ ၁ဝ့၁% ရှိတယ်။ (ဟာဝိုင်ယီ) မှာ မိသားစုပေါင်း ၁၇၄၈ ထဲက ကလေးပေါင်း ၂၈၃၉ ယောက်ကနေ ၂-၃% ရှိတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။
Non-paternity အဖေ-မစစ်တာကို စစ်လို့ သိလာ၊ တွေ့လာရင် လူမှုရေး-အရှုတ်အရှင်းသာမက ကျန်းမာရေး ပြဿနာပါ တက်ပါမယ်။ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ Cystic fibrosis ရောဂါအတွက် Genetic screening မျိုးဗီဇ စစ်ဆေးတဲ့အခါ သိလာစေတယ်။
1. Non-paternity အဖေ စစ်-မစစ်၊
2. Brother/sister sibling test မောင်နှမ စစ်-မစစ်၊
3. Half-brother/half-sister sibling test အမေတူ-အဖေကွဲ မောင်-နှမ ဟုတ်-မဟုတ်၊
4. Grandparentage test အဖိုး-အဖွါးမှန်-မမှန်၊
5. Uncle (aunt)/nephew (niece) test အဒေါ်-ဦးလေး တော်-မတော်တွေကိုလည်း စစ်လို့ရပါတယ်။
ဒီစစ်ဆေးမှုတွေကို တရားဝင်မှုရှိအောင်လဲ လုပ်ပေးဘို့ အလုပ်ရက် ၁၅ ရက်ဘဲ ကြာမယ်။ အပိုဆောင်းပေးရင် ၅ ရက်နဲ့ ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသတဲ့။ PRO-DNA Family Relationship Test စမ်းသပ်နည်းအတွက် $725 ကုန်ကျမယ်။ Legal admissibility ဥပဒေဘောင် ဝင်ချင်ရင် နောက်ထပ် $170 ဒေါ်လာ၊ ၅ ရက်နဲ့ ရချင်ရင် $275 ဒေါ်လာ အပိုပေးရမယ်လို့ ကြောညာထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပြင်ဆင်ရန်၊ ပယ်ဖျက်ရန်နှင့် အသစ်ပြန်ရေးရမည့် ဥပဒေ ၁၃၀ ကျော်ရှိဟု လွှတ်တော်ကော်မတီဆို
ပြည်ထောင်စုအဆင့် လွှတ်တော်သုံးရပ်၏ လက်ကျန် သက်တမ်း ၁ နှစ်ကျော် ကာလအတွင်း ပြင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်၊ အသစ်ရေးဆွဲရန် လိုအပ်နေသော ဥပဒေပေါင်း ၁၃၆ ခု ရှိနေကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းထွန်းဦးက ပြောကြားသည်။
လွှတ်တော်သုံးရပ် အပါအဝင် ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဆင့်ဆင့် စိစစ်မှုအရ ရုပ်သိမ်းရန် ဥပဒေ ၉ ခု၊ ပြင်ဆင်ရန် ဥပဒေ ၆၇ ခု၊ ရုပ်သိမ်း၍ အသစ်အစားထိုး ပြဋ္ဌာန်းရန် ဥပဒေ ၄၁ ခုနှင့် အသစ်ရေးဆွဲရန် ဥပဒေ ၁၉ ခုဟူ၍ စာရင်းပြုစု ရရှိထားကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။
အဆိုပါဥပဒေ အားလုံးနီးပါးမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများ ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေနှစ်ခုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဥပဒေ တစ်ခုကိုလည်း လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်ရန် စိစစ်တွေ့ရှိထားကြောင်း ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်သည့် ပူးပေါင်းကော်မတီ အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။
ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် ဥပဒေများတွင် လွှတ်တော်နှင့် အစိုးရအကြား အားပြိုင်ခဲ့သည် ဆိုသော နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းလည်း ပါဝင်ကြောင်း၊ မူလက နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များကို လျစ်လျူရှု၍ ပြင်ဆင် အတည်ပြုထားသည့် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံးဥပဒေကို ပြန်လည် ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ဥပဒေကြမ်း အသစ်တစ်ခု ရေးဆွဲရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အချို့ထံမှ သိရသည်။
လွှတ်တော်အရပ်ရပ်၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အတည်ပြု ကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေပေါင်း ၄၀၁ ခု ရှိခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အသစ်ရေးဆွဲ၊ ပြင်ဆင်၊ ရုပ်သိမ်း၊ အစားထိုးခဲ့သည့် ဥပဒေပေါင်း ၉၈ ခု ရှိကြောင်း၊ ယင်းစာရင်းတွင် စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာငွေအရ အသုံးဆိုင်ရာနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ၁၁ ခု ပါဝင်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
လွှတ်တော် လက်ကျန် သက်တမ်းကာလအတွင်း အထက်ပါ ဥပဒေများကို သတ်မှတ်ချက်အလိုက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကို တိုက်တွန်း အကြောင်းကြားထားကြောင်း ဥပဒေကြမ်း ပူးပေါင်း ကော်မတီထံမှ သိရသည်။
• ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒတွေပြင်းပြပြီးတော့ စိတ်အားထက်သန်လာကြတာကို မြင်လာတာနဲ့အမျှ တချို့တွေက စိုးရိမ်ပြီးတော့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်တာတွေက အောက်တန်းကျလာတယ်။ အဲလိုနည်းနဲ့ပြည်သူကို ဆွဲဆောင်တာ၊ စည်းရုံးတာဟာ ပြည်သူကို စော်ကားတာဘဲ။
• အောက်တန်းကျတဲ့နည်းတွေ မသုံးပါနဲ့။ ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ဆန့်ကျင်ကြပါ။ နိုင်ငံကြီးသားဆန်ဆန် အဆင့်မြင့်မြင့် ဆန့်ကျင်ကြပါ။
• ပြည်သူထူထုက ဘာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ပြတာကို မလိုက်လျောရင် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်သူလူထုကိုယ်စားလှယ် အစစ်အမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရမှာဘဲ။
သွေးထဲရှိသကြား (ဂလူးကို့စ်) ဓါတ်စစ်ဆေးခြင်း အဖြေများ
ကျားလိင်အင်္ဂါကို ဆေးထိုးကြတာတွေမှာ ဒုက္ခရောက်ကြလို့ မေးလာသူတွေ မနည်းပါ။ မေးတာ-ဖြေတာတွေကို အများဖတ်အောင် မတင်သင့်လို့ မတင်ပါ။ တချို့ဆိုရင် လူစဉ်မမှီဖြစ်သွားလို့ ဝမ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်ကြရတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ဘို့မသင့်လို့ မတင်တော့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သတိပေးဘို့လိုနေတာ အမှန်ပါ။ သိချင်သူတွေ တိုက်ရိုက် စာရေးနိုင်ပါတယ်။ အရပ်နည်းတွေ၊ အွန်လိုင်းကြော်ညာတွေကို မယုံကြပါနဲ့။ ကာကွယ်ရေး ကင့်ပိန်း လုပ်လို့လဲမသင့်လို့ လူဖြစ်ရှုံးသွားသူတွေ မနည်းတော့ပါ။ လက်လှမ်းမီသလောက် မလုပ်ကြအောင် သတိပေးကြစေချင်ပါတယ်။
မြို့နယ်တရားသူကြီးအဂတိလိုက်စားမှုကို ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် ခွင့်ပြုမိန့် မရသည့်အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးအဖွဲ့MDCF မှ ကိုသိန်းအောင်မြင့် သည် မြို့နယ် တရားသူကြီးအဂတိလိုက်စားမှုကို ချမ်းမြသာ စည်မြို့နယ်တရားရုံးရှေ့တွင်
ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် တိုင်းအ ထိခွင့်ပြုမိန့် တင်သော်လည်းမရသည့်အတွက်
ဆန္ဒထုတ်ဖော် မှုပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း သတင်းထောက် များအားယနေ့ 
ထို့ နောက် မြို့နယ်တရားသူကြီးအားသွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုအေးသိန်း၏ အမှု ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းဖို့ ကြိုးစားစဉ်
ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လာရောက် ညှိုနှိုင်းခဲ့သည်။ မြို့နယ်တရားသူကြီးမှ တိုင်းရုံးသို့ သွားရောက်နေ သဖြင့်တွေ့ဆုံခွင့်မရခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် လူတစ်ယောက်သည် အောက်ပါ အတိုင်းအော်နေသည်။
“လူတစ်ယောက်ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုက္ခရောက်နေရပြီ။ သူကတော့
အရှက်ကိုမရှိဘူး။ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အုပ်ချုပ်နေတယ်”
ထိုသူ ၅ ကြိမ်ခန့် ဆက်တိုက်အော်ဟစ်နေစဉ် ထောက်လှမ်းရေးများ
လာဖမ်းခေါ်သွားသည်။ စစ်ကြောရေးစခန်းရောက်သော် ထိုသူကို မေးလိုက်သည်။
“မင်းက မြို့တော်ခန်းမရှေ့မှာ ဘာတွေအော်နေတာတုန်း”
“လူတစ်ယောက်ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုက္ခရောက်နေရပြီလို့ အော်နေတာပါ”
စစ်ဆေးရေးအရာရှိ မျက်လုံးတို့ ကျဉ်းသွားသည်။
“ဆိုစမ်းပါဦး၊ မင်းက ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်ပြောနေတာလဲ”
“ဘယ်သူရှိရမလဲ၊ ကင်ဂျုံအန်ပေါ့ဗျ၊ သူ့ကြောင့်
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေ အ၀ါရောင်ကိတ်တွေပဲ စားနေရတာလေ”
“၀ိုး ဟိုးဟိုး၊ ဂလိုကိုး”
“အေးပါကွာ၊ ဒါဆိုလည်း ပြီးတာပါပဲ။ ခင်ဗျား အေးအေးဆေးဆေး ပြန်လို့ရပါပြီ”
ထိုသူသည် အခန်းတံခါးဆွဲဖွင့်ထွက်ခါနီးတွင် စစ်ဆေးရေးအရာရှိကို လှည့်မေးလိုက်သည်။
“တဆိတ်လောက်ဗျာ၊ ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုရည်ရွယ်အော်နေတယ်လို့ ဆရာက ထင်နေလို့လဲဟင်”
ဆဋ္ဌမမြောက်သက်ရှိမျိုးစိတ်များ ပျက်သုဉ်းမှုဘေးနှင့်ကမ္ဘာကြီး ရင်ဆိုင်ရဖွယ်
ယခုခေတ်ကာလ ရုက္ခနှင့် သက်ရှိမျိုးစိတ်များ ဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်
၁၀၀၀ ကျော် ပိုမိုမြန်ဆန်လျက်ရှိရာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်အနေဖြင့် ဆဋ္ဌမ
ကြောင်း လေ့လာချက် တစ်ရပ်အကိုးအကားပြု၍ ဇွန် ၁ ရက်
အဆိုအရ လူသားများ မဖြစ်တည်မီကာလက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း
ရုက္ခနှင့် သက်ရှိမျိုးစိတ် တစ်သန်းလျှင်တစ်မျိုး ပျောက်ကွယ်
ခဲ့ရသော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင်မူ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မျိုးစိတ် ၁၀၀
မှ ၁၀၀၀ အကြားပျောက်ကွယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ကွယ်မှုနှုန်းထား မြင့်တက်လာရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းတရား
တစ်ရပ်မှာ သက်ရှိမျိုးစိတ်များအတွက် စားကျက်နေရာများပျောက် ကွယ်လာရမှုကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းသုတေသနပညာရှင်များ၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မျိုးစိတ်များ အစုအပြုံလိုက် ပျောက်ကွယ်မှုကြောင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်၌
သက်ရှိအများစု ဆိတ်သုဉ်းခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်ပေါင်းအနည်းဆုံး ငါးကြိမ်အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးသည်။အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်စဉ်မှာ လွန်ခဲ့သော
နှစ်ပေါင်း၆၆ သန်းခန့်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်ကာလက ဒိုင်နိုဆောသတ္တ၀ါများနှင့် အခြားသက်ရှိများ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘာဂြိုဟ် သမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးကျယ်ဆုံးသက်ရှိများ မျိုးသုဉ်း
ပျောက်ကွယ်မှုမှာ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၂သန်းတွင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ထိုစဉ်ကာလအတွင်း မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ် အဏုဇီဝပိုးများကြောင့် ကမ္ဘာ့သက်ရှိ ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်
ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များအတွက် ဟိုတယ်အဆင့် ရှိ အဆောင်များကို လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင် ဆောက်လုပ်မည်
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂- တက္ကသိုလ်များ လှိုင်နယ်မြေတွင် ကျောင်းသားကျောင်း သူများနေထိုင်ရေး အဆင်ပြေစေရန် အတွက် ဟိုတယ်အဆင့်ရှိအဆောင် များကို ဆောက်လုပ်ပေးတော့မည် ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားမှုဖြင့် လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ တွင် စတင်ဆောက်လုပ်မည့် အ ဆောင်များကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အဆောင်များ အဖြစ်ဆောက် လုပ်ပေး မည်ဖြစ်ပြီး ယင်း အဆောင်များတွင် ဓာတ်လှေကား၊ ကားပါကင်၊ အဆင့်မြင့် ပရိဘောဂများဖြင့် အထပ်မြင့် အ ဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန (အောက် မြန်မာပြည်)မှ သိရသည်။
''ပညာရေးဝန်ကြီး လာပြီးကြည့် သွားတယ်။ ကျောင်းသားတွေအ တွက် နေထိုင်ရေး၊ သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေအောင် ဟိုတယ်လိုအဆောင် တွေ ဆောက်ပေးမယ်။ ချောင်ချောင် ချိချိနေလို့ ရအောင်ပါ။ ဆရာတို့အခု စတင်အကောင် အထည်ဖော်နေပြီ'' ဟုအဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန(အောက် မြန်မာပြည်)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ် ဦးကပြောသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန် ကြားမှုဖြင့်တက္ကသိုလ်များ လှိုင်နယ် မြေတွင် ကျောင်းသား ၄ဝဝဆံ့နှင့် ကျောင်းသူ ၄ဝဝဆံ့ အဆောင်တစ် ခုစီ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ၆ ခန်းတွဲ ၂ လုံး၊ စာစစ်ဌာန ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရန် အထပ်မြင့်အိမ်ရာများကို စတင် ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
''အခုဆောက်လုပ်မယ့်အထဲ မှာ ဆရာတွေအတွက်လဲ ပါတယ်။ စာသင်ဆောင်က စာသင်ဆောင် သပ် သပ်၊ ကျောင်းသားနေတဲ့ အဆောင် က သပ်သပ်။ ဆရာတွေအတွက်ဆို ရင် အိမ်ရာသီး သန့်တွေ ဆောက် ပေးမှာပါ။ အခုဆိုရင် ဆရာတွေထား တဲ့အဆောင်တွေကို ကျောင်းသား သီးသန့်ထားဖို့တွေ လုပ်ပြီးပြီ''ဟု ယင်းညွှန်ကြားရေးမှူးက ထပ်မံပြော သည်။
လက်ရှိ အခြေအနေအရကျောင်း သားအဆောင်များကို စာသင်ဆောင် များအဖြစ် ပြုလုပ်ထားခြင်းများကို လည်း နောင် တစ်ချိန်တွင် ကျောင်း သားများ ပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ရန် အတွက် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ညွန့်ကြားထားပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
''ပညာရေးဝန်ကြီးကျောင်းတွေ ကို လာကြည့်သွားတုန်းက စာစစ် ဆိုရင်စာစစ်နေရာကို သေချာဆောက် ပေးပါ့မယ်။ ကျောင်းသားနေခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို ပြန်နေလို့ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေး ပါ့မယ် ဆိုပြီးပြောသွားခဲ့တယ်။ မိန်းကလေး ဆောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မာလာဆောင်ကိုလည်း ပြန်ရအောင်တင်ပြပေးသွားပါ့မယ်'' ဟု ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပါ မောက္ခချုပ် ဒေါက်တာခင်နိုင်ဦး က ပြောသည်။ ကျောင်းသားများ ပညာသင် ယူ ရာ တွင် ကျောင်း ပတ်ဝန်းကျင် ကောင်းများရရှိရန်မှာလည်း တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပတ်ဝန်း ကျင်ကောင်းများထဲမှာ ယခုဆောက် လုပ်မည့် အဆောင်များကိုအနိမ့်ဆုံး အာဆီယံအဆင့်မီစေရန် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ဆောက် လုပ်မည့် ခေတ်မီ အဆောက်အအုံများကိုလည်း ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ များ ထံ တင် ဒါများ ခေါ်ယူကာ ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ အတွင်း ဇွန် ၂ ရက်နေ့က ကျောင်းသားများ သွားလာနေသည်ကိုတွေ့ရစဉ်။ ဓာတ်ပုံ - ရဲနောင် (ဖယ်ခုံ)
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာမေဂျာဖြင့် ပဲခူးတိုင်းမှ လာရောက် ကျောင်းတက် သူ ကျောင်းသူ တစ်ဦးက''အခုလို အဆင့်မြင့်မြင့် နေရရင်တော့တာ ဝန်ရှိသူ တွေကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ အငွေ့အသက်မှာ အဆောင်ဆို တာအခရာအကျဆုံးပါ။ အခုကျောင်းသားနည်းနေသေးတော့ သိပ်မသိသာသေးဘူး။ ကျောင်း သားတွေများ လာရင် ရန်ကုန် တက္က သိုလ်ရဲ့ အရင်အချိန်တွေပြန်ရလာ မယ်လို့ထင်တယ်''ဟုဆိုသည်။
အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်မည့် အဆို ပါ အဆောင်အသစ်များကို ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အပြီးသတ်ဆောက် လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိ တက္ကသိုလ်များ တွင်ပထမနှစ်တက် ရောက်သင်ကြားနေသည့်ကျောင်း သား၊ကျောင်းသူများသည် ဒုတိယ နှစ်တက်ရောက်ပါက ယင်းအဆောင် အသစ်များတွင် နေထိုင်ခွင့်ရရှိတော့ မည်ဖြစ်ကာ အသစ်ဝင်လာမည့် ပထမနှစ် ကျောင်းသားများသည်လည်း ယခင်ပထမနှစ်ကျောင်းသားများ တက်ရောက်ခဲ့သည့် အဆောင်နေရာ များတွင် နေထိုင်ခွင့်ရရှိ မည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
''လက်ရှိအဆောင်တွေက ပထမနှစ်တက်နေတဲ့ ကျောင်းသား တွေအတွက်ထားတာဖြစ်လို့သူတို့ ဒုတိယနှစ်တက်ရင် ထားနိုင်အောင် လို့ခုလိုစီစဉ်ပေးရတာပါ။ ပထမနှစ် တွေဝင် လာရင် ဒုတိယနှစ်တက် မယ့် ကျောင်းသားတွေက နေစရာ မရှိတော့ဘူးလေ။ အခုလောလော ဆယ် နိုင်သလောက် ပထမနှစ်နဲ့ ဒုတိယနှစ်ပဲထားမှာ။ နောက်ဆို ရင် လေးနှ စ်စာ အတွက် ထားနိုင် အောင် လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ အဆောင်လခ တွေက တစ်လငါးထောင်နှုန်းပါပဲ'' ဟု အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ ညွှန် ကြားရေးမှူးက ပြောသည်။
လက်ရှိအကောင်အထည် ဖော်မည့်အဆိုပါ တက္ကသိုလ်ဆောင် များတွင် ကျောင်းသားများကို လက်ခံ ရာတွင် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာနယ်နိမိတ်ပြင်ပမှ ပထမနှစ် ကျောင်း သားများ ကို ဦးစားပေး လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်ကြ မည့် ကျောင်း သားကျောင်း သူများ အနေဖြင့်လည်း အဆောင်စည်း ကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်လိုက်နာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''အဆောင်မှာနေတဲ့သူဆိုရင် အဆောင်နေစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာမှဖြစ်မယ်။ မူးယစ်သောက် စားတာတွေ၊ ဥပဒေနဲ့ မလွတ်ကင်း တာတွေကို လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မူးရမ်းတာ မျိုးတွေဆို လည်း ထုတ်ပစ် မှာပါ''ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြော သည်။
၂၀၁၃-၁၄ပညာသင်နှစ် တွင် ပထမနှစ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များကို စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ် ပြင်ပမှ ရန်ကုန်မြို့တွင် တက်ရောက် သင်ကြားနေသောကျောင်းသားများ ကို အဓိက ဦးစားပေးရွေး ချယ်သွား မည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆောင်လုံလောက်မှု မရှိပါက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအမှတ် စုစုပေါင်းအနည်းအများပေါ်မူတည် ၍ ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယခုဖွင့်လှစ်မည့် အဆောင်များ တွင်တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာ နယ်နိမိတ်ပြင်ပ ဖြစ် ရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော် လည်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာ ယာနယ်နိမိတ်အတွင်းမှ မိမိ တက် ရောက်နေ သည့် တက္ကသိုလ်များကို သွားလာရာတွင် ခက်ခဲသည့်ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများကိုလည်းဒုတိယ ဦးစားပေး အနေဖြင့် ရွေးချယ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသော တက္ကသိုလ် များအသီးသီးတွင် တက်ရောက်နေ ကြသည့်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များအနေဖြင့် မကြာမီဖွင့်လှစ်မည့် ယင်းအဆောင်များတွင် နေထိုင်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် အတွက် တက္ကသိုလ်များ ကျောင်းဖွင့်ချိန်တွင် တစ်ပါ တည်း လျှောက် ထားနိုင်ကြောင်း သိရ သည်။
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ပိုင်ဈေးလိုင်စင်အသစ် လျှောက်ထားနိုင်
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ပိုင်ဈေးလိုင်စင်အသစ် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ၊ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ပတ်စပို့မိတ္တူ၊ ကိုယ်ပိုင်ဈေးအမည် စသည့်အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ်ပိုင်ဈေးအကျယ်အဝန်း၊ အထပ်အရေအတွက်၊ ကိုယ်ပိုင်ဈေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၊ လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံသုံးပုံတို့လည်း လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းမှလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အနီးဆုံးပတ်ဝန်းကျင် ဆယ်ဦးထောက်ခံချက်၊ မြို့နယ် (မီးသတ်၊ လျှပ်စစ်၊ စည်ပင်၊ ကျန်းမာရေး) ထောက်ခံချက်၊ လုပ်ငန်းတည်နေရာ (လိပ်စာ) နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားတို့လည်း လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခြားအထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများလိုအပ်ပါက တစ်ပြိုင်တည်းတောင်းခံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက နှစ်ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ www.ycdc.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရားမ၀င်၊ အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များ ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှု ပိုမိုဆိုးဝါးလာ
တရားမ၀င် တင်သွင်းလာသော အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များကို ဈေးကွက် အတွင်း ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုများ ပိုမို ဆိုးဝါးလာသည့် အတွက် အရေးယူသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
လက်ရှိတွင် အရက်၊ ဘီယာ၊ စီးကရက် များကို နိုင်ငံတွင်း တရားဝင် တင်သွင်းခွင့် မရှိဘဲ ရောင်းဝယ်ခွန် ဆောင်ကာ ရောင်းချနေခြင်းကြောင့် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဥပဒေအရ အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်ရဲဝင်းက The Messenger သတင်းစာသို့ ပြောသည်။
““ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက် လျှော့ပေးတာကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး သွင်းလာတာ များတယ်””ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယခုအခါ တရားမ၀င် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက် အမြောက်အများသည် ပြင်ပ မှ ပြည်တွင်းသို့ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ၀င်ရောက်လျက် ရှိပြီး၊ ယင်းပစ္စည်း များသည် ကြီးကြပ် ကန့်သတ်မှုဖြင့် ပြည်တွင်း၌ တရားဝင် ထုတ် လုပ်၍ အခွန်ပေးဆောင် နေသော လုပ်ငန်းများကို နစ်နာစေကြောင်း၊ ယင်းပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားခြင်းသည် ဥပဒေကို ဖောက်ဖျက် နေခြင်းအတွက် ရပ်တန့်ကြရန် သတိပေး နှိုးဆော် ထားသည်။
တရားမ၀င် တင်သွင်းသော အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်နှင့် စီးကရက်များ ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း များပြုလုပ်ပါက ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားသော ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ဥပဒေအရ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဒဏ်ငွေ ချမှတ်ခြင်း၊ အမြင့်ဆုံး အနေဖြင့် ထောင်ဒဏ် သုံးနှစ်အပြင် ပြစ်ဒဏ် နှစ်ရပ်စလုံး ချမှတ် နိုင်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
ယင်းအပြင် စစ်ဆေး အရေးယူရာတွင် သတင်းပေးပို့သူ ပြည်သူများကိုပါ ဆုငွေပေး အပ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆေးရုံနှင့် ကျောင်းများ၌ Telecenter ပေါင်း ၅ ထောင်ခန့် Ooredoo တည်ဆောက်ပေးမည်
ဆေးရုံနှင့် ကျောင်းများ၌ Telecenter ပေါင်း ၅ ထောင်ခန့်ကို တည်ဆောက်ပေးသွားမည်ဟု Ooredoo Myanmar ၏ CEO ဖြစ်သူ Ross Cormack က ပြောသည်။
အင်တာနက် အသုံးပြုဖူးသူများအတွက် အင်တာနက်စနစ်နှင့် ထိတွေ့အသုံးချနိုင်ရန် Ooredoo က Telecenter များကို တည်ဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းအရ ၅ နှစ်အတွင်း Center ပေါင်း ၅ ထောင် တည်ဆောက်ပြီးစီးမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်ကုန်၌ Center ပေါင်း ၁၀၀ ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
Telecenter တည်ဆောက်မည့် တည်နေရာများနှင့် Telecenter ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မသိရှိရသေးသော်လည်း အဆိုပါ Telecenter များသည် ပြည်သူလူထုအတွက်၏ အိုင်စီတီအသုံးပြုမှု၌ အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်ဟု Ooredoo က ကြေညာခဲ့သည်။
Ooredoo သည် မြန်မာအစိုးရထံသို့ လိုင်စင်စတင်လျှောက်ထားစဉ်က Telecenter တည်ဆောက်ပေးရန် ကတိပြုခဲ့ပြီး ၎င်း၏အဓိကပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် Telenor သည် အင်တာနက်စနစ်ပါဝင်သည့် Community Center ပေါင်း ၂၀၀ ခန့် တည်ဆောက်ပေးသွားမည်ဟု ကတိပြုပြောကြားခဲ့သည်။
လပ်တော့ တစ်လုံးဟာ စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးထက် ပိုပြီး ပါးလွှာနေတာဟာ ထူးဆန်းမူတစ်ခုမဟုတ်ပါလား။ ဒီ ASUS' GX500 လပ်တော့လေးကတော့ ထူးထူးခြားခြားပါပဲ ။ ကမ္ဘာ့ အပါးလွှာဆုံးလို့ အသိအမှတ် ပြုခံထားရတဲ့ Hauwei ရဲ့ စမတ်ဖုန်း P7 ဟာ ၆.၅ မီလီမီတာ ရှိပါတယ်။. ထို ASUS' GX500 ဂိမ်းမင့် လပ်တော့မှာ ဆိုရင်တော့ ၁၉ မီလီမီတာပဲ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အကျယ် ၁၅ လက်မကျော်၊ အလေးချိန်ကလည်း ၂.၂ ကီလိုသာသာ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ i7processor နဲ့ထုတ်ပိုးထားပြီး နောက်ဆုံးထွက် အကြည်လင်ဆုံး ရုပ်ထွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ 4K ရုပ်ထွက်ကို ရရှိမှာပါ။ ဂိမ်းဆော့ ဖို့အတွက် ရုပ်ထွက်အတွက် အရမ်းမိုက်တဲ့ NVIDIA GeForce GTX 860M graphics ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။.
ဈေးနှုန်းနဲ့ ဘယ်တော့ ရရှိလာမယ်ဆိုတာကျုတော့ အတိအကျမသိနိင်သေးပဲ ။ မကြာခင်မှာတော့ ရောက်ရိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်-နေပြည်တော် အမြန်လမ်းစစ်ဆေးယာဉ်အား လေးခွဖြင့်ပစ်သူ အမှုဖွင့်အရေးယူ
မေ ၂၉ ရက် နံနက် ၄ နာရီ မိနစ်၂၀ ခန့်က အင်းစိန်မြို့နယ် သစ်တောအုပ်သည် ရန်ကုန်နေပြည်တော် အမြန်လမ်း တစ်လျှောက် နယ်မြေစစ်ဆေးခြင်းကို ဌာနပိုင်ဆာဖ့်နက်ပြာရောင်ယာဉ်ဖြင့် လိုက်လံစစ်ဆေးခဲ့စဉ် မိုင်တိုင်အမှတ် (၀/၃) အနီးရှိ တိုးဂိတ်တွင် နေပြည်တော်မှရန်ကုန်သို့ မောင်းနှင်လာသည့် တိုယိုတာကိုရိုလာယာဉ်အား မသင်္ကာဖွယ် တွေ့ရှိသဖြင့် လိုက်လံစစ်ဆေး ခဲ့သည်။
အမှတ် ၃ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံရေးစခန်းတွင် ဟယ်ရီယာယာဉ် ကို ကျော်တက်မောင်းနှင်စဉ် ၎င်းယာဉ်တွင်း မှ လေးခွဖြင့်ပစ်သဖြင့် ဆာ့ဖ်ယာဉ်ရှေ့တံခါးမှန်ကွဲကာ ယာဉ်ရှေ့ခန်းတွင် ထိုင်နေသည့် တောအုပ်၏ ဘယ်ဘက် နားထင် ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောကြောင့် အရေးယူပေးရန် တိုင်ကြားခဲ့သည်။
ထောက်ကြန့်နယ်မြေ ရဲစခန်းက (ပ)၁၅၄/၁၄ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၅၃/၃၃၇/၄၂၇/၁၁၄ အရ အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
တပ်မတော်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများကို ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ် မရေးထိုးရန် မှာကြားထား
တပ်မတော်သားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစု ၀င်များကို ပုဒ်မ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် လက်မှတ်ထိုးမှုများ မပြုလုပ်ကြရန် မှာကြားထားကြောင်း တပ်မတော် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ တားမြစ်ရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်းအလိုက် တပ်ရင်းတစ်ခုလုံးကို အစည်း ဝေးခေါ်ယူ၍ သတိပေး ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ မလိုက်နာပါက ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ်ချ မှတ်သွားမည်ဟု ပြောကြားထားကြောင်း တပ်မတော်သား အချို့နှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများထံ မှ သိရသည်။
““ပုံမှန်အစည်းဝေး လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို လက်မှတ်မထိုးကြဖို့၊ လာထိုးခိုင်းရင်လည်း မထိုးဖို့ ပြောတယ်။ သူတို့ ပြောချင်တာ ကတော့ နိုင်ငံတော် လစာငွေကို စားနေကြတဲ့ အတွက် ဒီလိုတွေ မလုပ်ဖို့ ပြော တာပါ””ဟု နေပြည်တော် တိုင်းဒေသကြီး စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ရှိ လက်နက်ပြင် တပ်ရင်းတစ်ခုမှ တပ်ကြပ်တစ်ဦး၏ ဇနီးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် တပ်မတော်သား များ၏ မိသားစုဝင်များ အနေဖြင့်လည်း တပ်ရင်း အတွင်း နေထိုင်သည် ဖြစ်စေ ပြင်ပတွင် နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ လက်မှတ် မရေးထိုးရန် အတွက်လည်း မှာကြားထားကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
““အရင်တည်းက နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ခပ်ကင်းကင်းနေဖို့ မှာထားတာ၊ ခုဒီလို ပြောတာ သိပ်တော့ အဆန်း မဟုတ်တော့ဘူး”” ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်မှ အမည် မဖော်လိုသည့် တပ်မတော်သား တစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးမှုကို NLD ပါတီမှ ဦးဆောင် ကောက်ယူနေခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ မည်သူမဆို လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ရန် အတွက် မြို့နယ် အသီးသီးရှိ NLD ရုံးများတွင် လက်မှတ်ထိုး ကောင်တာများ ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါ လက်မှတ်ရေးထိုးမှုများသည် ဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သော ကြောင့် တပ်မတော်သားများ အပါဝင် အစိုးရ ၀န်ထမ်းများ၊ ပြည်သူများကို ဖိအားပေး ခြိမ်း ခြောက်မှုများ ရှိလာပါက တရားဥပဒေ အရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြား ထားခဲ့သည်။
““ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာမှတော့ ပြောမထားဘူး။ ပါတီ နိုင်ငံရေးတွေ မလုပ်ဖို့၊ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေနဲ့ မပတ်သက်ဖို့ လောက်ပဲ ပြောထားတယ်”” ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ တပ်မတော်မှ ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့် တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ဆင်းရန် အတွက် ပြည်သူများ၏ သဘောထား လက်မှတ်ကို ကောက်ခံရခြင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ အရေးကြီး အချက် အချို့တို့ကို ပြင်ဆင်လိုလျှင် ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင် မြှောက်ထားသော ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ဆန္ဒဖြင့် ပြင်ဆင်မရသည့် အပြင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ သဘောထား မှတ်ချက် ပါမှသာ ပြင်ဆင်နိုင်မည်ဟု ယင်းပုဒ်မ ၄၃၆ က ပြဋ္ဌာန်းထား သောကြောင့် အဆိုပါ ဥပဒေကို ဦးစွာ ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပုဒ်မ ၄၃၆ လက်မှတ် ရေးထိုးမှု များကို မေလ(၂၇)ရက်နေ့ မှယခုလ (၁၉)ရက် နေ့အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်ပြီး၊ ရရှိသော အချက်လက်များကို လွှတ်တော်သို့ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လက်မှတ် ရေးထိုးမှုကို တပ်မတော်သားများ အပါအ၀င် အစိုးရ အဖွဲ့ကလည်း ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးကြရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တိုက်တွန်း ထားသည်။
ကောက်ရ ဆင်းကဒ်အလွတ်ကို ရဲစခန်းသို့ လာရောက်အပ်နှံသည့် အသက်မပြည့်သူအား ရဲများက ဖမ်းဆီးချုပ် နှောင်ကာ ရိုက်နှက်ထား ဟု ဆို
ရက်စွဲ - ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ (၃) ရက်
အကြောင်းအရာ။ ။ မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲပြီး ချုပ်နှောင်ထားသည့်အတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြစ်နိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးပါရန် အသနားခံ တင်ပြခြင်း။
၁။ အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော်သည် စစ်တွေမြို့၊ မင်းဘာကြီးလမ်း၊ ကျောင်းတက်လမ်းရပ်ကွက်၊ အိမ်အမှတ် (၂၉၄) တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်နှင့်အတူ မြေးတော်စပ်သူ အောင်ဆန်းဝင်း (ခေါ်) ညီချေ (ဘ) ဦးကျောက်သီးအောင် လည်းနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၉-၅-၂၀၁၄ ရက်နေ့ ညနေ (၃) နာရီ နှင့် (၄)နာရီကြားတွင် အောင်ဆန်းဝင်း (ခေါ်) ညီချေ သည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားစဉ် မင်းဘာကြီးလမ်း နှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့် မှ ဖုန်း ဆိမ်းကဒ် အလွတ်တစ်ခု ကောက်ရခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၂။ ထို့ကြောင့် ၄င်းဆိမ်းကဒ်မှာ ဆက်သွယ်၍ ရမရ သိရှိနိုင်ရေးအတွက် အခြား ဟန်းဆက် တစ်ခုတွင် ထည့်လိုက်သည်နှင့် တစ်ဘက်မှ ဆက်သွယ်လာရာ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှ ဆိမ်းကဒ် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ၄င်း ဆိမ်းကဒ်ကို အမြန်ဆုံး လာရောက်ပေးကပ်ရန် အကြောင်းကြား၍ ချက်ချင်းပင် အမှတ်(၁) ရဲစခန်းသို့ အောင်ဆန်းဝင်း (ခေါ်) ညီချေ ကိုယ်တိုင် သွားရောက်အပ်နှံသောအခါ မဟုတ်မမှန် စွပ်စွဲလျက် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အုပ်ထိန်းသူ ဖြစ်သည့် ကျွန်တော်တို့အား အသိပေးခြင်း မရှိဘဲ ယနေ့တိုင် တွေ့ဆုံရခြင်းလည်း မရှိသေးပါ။ ထို့ပြင် ဖမ်းဆီးခံရသည့်နေ့မှစ၍ တရားနည်းလမ်းမကျသည့် ကိုယ်ထိလက်ရောက် သတ်ပုတ်ရိုက်နှက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခံရကြောင်းလည်း ကြားသိရပါသည်။
၃။ အောင်ဆန်းဝင်း (ခေါ်) ညီချေ မှာ တိုင်းပြည်အတွက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် အရံမီးသတ် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အခြားလုံခြုံရေးသင်တန်းများကို တက်ရောက်၍ လည်းကောင်း တက်ကြွစွာပါဝင် ဆောင်ရွက်နေသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးသားပြီး အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်အား ပူးတွဲတင်ပြအပ်ပါသည်။
၄။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကောက်ရထားသည့် ပစ္စည်းအား ရိုးသားစွာအပ်နှံပေးခဲ့သူကို ယခုကဲ့သို့ မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲကာ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားခြင်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေ နှင့် အညီ ဖြစ်နိုင်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အသနားခံတင်ပြ လျှောက်ထားအပ်ပါသည်။
ဖုန်း - ၀၉၄၂၁၇၆၆၂၆၉
အယ်ဒီတာ့ မှတ်ချက်။ ။ အောင်ဆန်းဝင်း (ခေါ်) ညီချေ မှာ အသက် (၁၇) နှစ်မျှသာ ရှိသေးသည် ဟု သိရပါသည်။
စစ်တွေ ၊ ၀၃ ဇွန်လ ၂၀၁၄ ၊ Coral Arakan News ၊ [ တိုင်စာ ]
အီရန်နိုင်ငံမြို့တော် တီဟီရန်တွင် သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူလေးဦးသေဆုံး၊ ဒါဇင်နှင့်ချီ ဒဏ်ရာရ
လေတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အမှိုက်များ လွှင့်ပါကာ ပြတင်းပေါက်များ ကွဲကြေ
တီဟီရန်- အီရန်နိုင်ငံမြို့တော် တီဟီရန်တွင် တနင်္လာနေ့ညနေ လူစည်ကားသည့် ရုံးဆင်းချိန်၌ ကြီးမားပြီး အရှိန်ပြင်းထန်သည့် သဲမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် လူထောင်နှင့်ချီ၍ အကာအကွယ်များနောက် ပုန်းခိုနေထိုင်ခဲ့ရကာ လျှပ်စစ်မီးများပြတ်တောက်ခြင်း၊ အဆောက်အအုံများပျက်စီးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
သေဆုံးသူ လေးဦးရှိခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရသူများ ဒါဇင်နှင့်ချီ ရှိခဲ့သည်။
ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၅ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သော ထိုမုန်တိုင်းမှာ သစ်ပင်များကို လဲစေခဲ့ပြီးကားမှန်များကိုလည်း အပျက်အစီးအပိုင်းအစများဖြင့် ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ကာ လူအများစုမှာ လေကွယ်ရာအရပ်များတွင် ခေတ္တခိုလှုံခဲ့ရသည်။
သဲမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သွားချိန်တွင် အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီ ကီလိုမီတာ ၁၁၀ အထိ ရှိခဲ့ပြီး နေအိမ်အနည်းဆုံး ငါးသောင်းခန့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်ခဲ့ရကြောင်း၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များနှင့် ဓာတ်တိုင်များ ပြိုလဲခဲ့ရကြောင်း လျှပ်စစ်ဌာန တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
မိနစ် ၉၀ ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့သည့် သဲမုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရသူများမှာ အဓိကအားဖြင့် သစ်ပင်ပိကျမှုများကြောင့် သေဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရအရေးပေါ်ဌာန အကြီးအကဲ အမ်မင်ဆပ်ဘရီနီယာက ဒဏ်ရာရသူဦးရေမှာ အနည်းဆုံး ၂၇ ဦးရှိခဲ့ပြီး ၁၀ ဦးမှာ မုန်တိုင်းတိုက်ချိန်တွင် လမ်းပေါ်၌ မတော်တဆမှုများကြောင့်ဒဏ်ရာရခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံကလည်း ဒဏ်ရာရသူများထဲတွင် နှစ်ဦးမှာ အရေးပေါ်ကုသမှုများ ခံယူနေရကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
__Ref : AFP
သဲမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်စဉ် ထူထဲသော ဖုန်မှုန့်များကြောင့် ကောင်းကင်လိမ္မော်ရောင်သို့ ပြောင်းသွားပုံ
မြင်ကွင်းမှုန်ဝါးနေသဖြင့် ယာဉ်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွား
သစ်ပင်များ လဲကျမှုကြောင့် အချို့သော ဒေသခံများ ဒဏ်ရာရ
ပြည်ပခရီးသွားလိုင်စင် အာမခံကြေး ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ပေးသွင်းရမှု လက်မခံ
ပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကို လိုင်စင်အာမခံကြေး ကျပ် သိန်း ၅၀၀ ပေးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် လျာထားတာကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတွေက တောင်းဆိုထားကြောင်း မြန်ဂုဏ်မြှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း မန်နေဂျာ ဒေါ်မေစံပယ်အောင်က ဒီဗွီဘီ ကို ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေ ၃၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန် ကုန်သည်များနဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (ယူအမ်အက်ဖ်စီစီအိုင်) ရုံးမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းက ဦးစီး ကျင်းပတဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ်
(Outbound Tour) ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်တွေ က တောင်းဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ တရားဝင် လိုင်စင်မရှိသေး ပဲ ပြည်ပခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကို လိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက စည်းကမ်း မူကြမ်းထုတ်ပြန်ရာမှာ အဲဒီအချက်ကို ထည့်သွင်းထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်က လိုက်လျောမယ်၊ မလိုက်လျောဘူးဆိုတာ မသိသေးပါဘူး။
ခရီးသွားဘလော့ဂါတစ်ဦး ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့ရှိ ခရစ်တော်ရုပ်တုပေါ်တက် ဓာတ်ပုံရိုက်
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး- Flash Pack အမည်ဖြင့် အင်တာနက်ခရီးသွား ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာတစ်ခု ဖွင့်ထားသည့် သွမ်ဆင်ဆိုသူသည် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲအတွက် ပြင်ဆင်ရန် ဘရာဇီးနိုင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့သို့ သွားရောက်စဉ် Christ the Re deemer ရုပ်တုပေါ်သို့တက်၍ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သည်။
သွမ်ဆင်သည် ၁၂၄ ပေမြင့်သော ခရစ်တော်ရုပ်တုပေါ်သို့ တက်ရန် ဘရာဇီးနိုင်ငံ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူခဲ့ပြီး ကြိုးချည်ကြိုးဖြုတ် ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ဦး၏ အကူအညီဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုပ်တုပေါ်သို့ မိနစ် ၂၀ ခန့် တက်ခဲ့ရပြီး ရုပ်တု၏ ရင်ဘတ်နားသို့ ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက် ရုပ်တု၏ပခုံးပေါ်မှတစ်ဆင့် နောက်ဆုံးတွင် ရုပ်တု၏ ဦးခေါင်းပေါ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်ဟု သွမ်ဆင်က Flash Pack ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
မိမိရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော ဓာတ်ပုံများမှာ အသက်ရှူမှားလောက်သည်ဟု သွမ်ဆင်က ပြောသည်။
ရုပ်တု၏ ထိပ်ဖျားမှနေ၍ သွမ်ဆင်ရိုက်ကူးခဲ့သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ယူကျုဘ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကျွန်တော်သည် မဟာဗန္ဓုလပန်း ခြံလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့် မီးပွိုင့် ကို ကွေ့ဝိုက်ကာ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု ဘဏ်အရှေ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ အလယ် ဘလောက် သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။ အချိန်မှာ နံနက် ၁၁ နာရီခန့် ရှိသည်။ ဘဏ်ဝတ်စုံဖြင့် လုံခြုံရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ”ဟိုမှာလာနေကြပြီ..ကားနဲ့” ဟု အော် လိုက်ပါသည်။
မီးပွိုင့် နှင့် ဘဏ်ရှေ့ဘက်လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းဈေးသည်အားလုံး ဝရုန်းသုန်း ကားဖြစ်သွားသည်။ရှေ့တွင် ဈေးဆိုင်များမှာ အသင့်ထိုးရပ် ထားသော ကားပေါ် တင်သူ တင်၊ ပလတ်စတစ်သေတ္တာပုံးကြီးထဲ ထည့်သူထည့်၊ ထမ်းပြီးပြေးသူပြေး။ ပွက်လောညံနေပါသည်။
မကြာမီပင် ကျွန်တော်ရှေ့မှ ဝတ်စုံအပြည့် ရဲသားတစ်ဦးက ”မြန်မြန်သိမ်း၊ မြန်မြန်သိမ်းကြ ဟိုမှာလာနေကြပြီ” ဧမာနွေလ ဘုရားကျောင်းမရောက် မီ တရားရုံးချုပ် ဂိတ် ဝ အနီး ရဲသားတစ် ဦး ဝတ်စုံအပြည့်ဖြင့် ”လာနေပြီ မြန် မြန်သိမ်းကြ… မြန်မြန်သိမ်းကြ”ဟု သတိပေး၍ ကျွန်တော့်ကို ကျောပေးကာ ပလက်ဖောင်းဈေးသည်များကို သ တိပေးပြောသွားသည်။ ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီ။ ပလက် ဖောင်းဈေးသည်များ မရောင်းရသည့် အချိန်၊ မရောင်းရသည့် နေရာကန့်သတ် နယ်မြေအတွင်း စီမံချက်ဖြင့် လိုက် လံ အရေးယူနေသော ရဲကားများ လှည့်လာခြင်းကို သတိပေးနေကြသည့် မြင်ကွင်းပင်ဖြစ်သည်။
► တာဝန်ယူမှု မတူကြဘူးလား
ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခု၏ စီမံချက်တစ်ခုကို လိုက်လံအရေးယူဖမ်းဆီးသည့် အစီအစဉ်ကိုမလာရောက်မီ အချိန်တိုအတွင်း ရှေ့ပြေးအဖြစ် အခြားရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဦး(သို့) ပလက်ဖောင်း တာဝန်ကျ ရဲများက သတိပေးဆိုင်သိမ်းခိုင်းခြင်း (သို့) ကားပြန်သွားပြီ ပြန်ရောင်းကြတော့ဆိုသည့် ခွင့်ပြုပေးခြင်းသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု(သို့) ပူးပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့ စည်း ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်နေမှုအပေါ်တွင် ကျွန်တော်လို အရပ်သားလမ်းသွားလမ်းလာသူတစ်ဦးအတွက် အလွန်ထူးဆန်း ရွံရှာစရာ ကောင်း သည့် မြင် ကွင်းတစ်ခုကို မြင် လိုက်ရပါသည်။ ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ မေးခွန်း ပေါင်းများစွာ ထွက်လာ၏။
(၁) လမ်းတာဝန်ကျသူများက ကိုယ့် နည်း ကိုယ်ဟန်ဖြင့် (အပေါ်တစ် ဝက် ပေး ကိုယ်တစ်ဝက်စား)ဈေးကောက် ခိုင်းခွင့်ပြုထားလေသလား။
(၂)ကားနှင့်လှည့်လည်ဖမ်းဆီးနေသူ အ ဖွဲ့များက ဝတ်ကျေတန်းကျေ အဖမ်းပြပွဲ ကျင်းပနေသလား။
(၃)ကားအဖွဲ့နှင့် လမ်းတာဝန်ကျ အဖွဲ့ လက်ဝါးချင်းရိုက်ထားကြလေသလား။
(၄) သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတစ်ဖွဲ့နှင့် တစ် ဖွဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲ၍ ဖမ်းသူမလာမီကြိုသိမ်းခိုင်းကြလေသလား။
(၅) လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းကိုမြို့တော် စည်ပင်ပိုင်သည်ဟု ကျွန်တော်သိထား ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်ဝန်ကြီး ရုံးစိုက်ရာ မြို့တော်ခန်းမနှင့်ကိုက် ၂ဝဝ ခန့် သာဝေးသောနေရာတွင် ဖြစ်ပျက် နေသော မြင်ကွင်းမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေး မရနိုင်ဘူးလား။
(၆) အမိန့်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရန် ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး တိကျစွာ လိုက်နာရ မည့် ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်တိုင် လိုက်နာမှု မရှိခြင်း၊ မျက်ကွယ်ပြုခြင်းဖြစ်နေပါပြီ လား။
(၇) ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူထိန်း သိမ်းလုပ်ဆောင်ရမည်တစ်နည်း၊ မ လိုက်နာသူ ပြည်သူများကို အသိပေး ခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်း လုပ်ရမည်ကို မသိ ကျိုးကျွံပြုနေပြီ လား။
(၈) ထိုထက်မက ရန်ကုန်မြို့နှင့် မိုင်ပေါင်းများစွာဝေးသော ကျေးလက်ဒေသများတွင် သူတို့၏ လုပ်ရပ်များ ဘယ် လောက်ထိရှိနေနိုင်မလဲစသည့် ကျွန် တော်စိတ်ကူး အတွေးများစွာ ဆွဲထုတ် ယူလျက်စဉ်းစားကာ ရုံးပေါ်တက်လာခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်ရုံးခန်းသို့ ပြန်ရောက် ချိန်တွင် အတွေးစိတ်ကူးများ ရပ်တန့် လိုက်ပြီး သတင်းစာတစ်စောင် ကောက် ကိုင်ဖတ်လိုက်သည်။ ရန်ကုန်တွင် နှစ် လခန့် အတွင်း မော်ေ တ်ာဆိုင်ကယ်အစီး ၃ဝဝ ခန့် ဖမ်းဆီးရရှိ ဟူသော သတင်းကိုတွေ့ လိုက်ရပါသည်။ ရဲနှင့်ပတ်သက်နေသော သတင်း တစ်ပုဒ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အကြောင်း ကို တွေး ရင်းရပ်သွားသော အတွေးစက ခေါင်းထဲသို့ တစ်ဖန်သွင်းလာရပြန်ပါသည်။
ရွှေပြည်သာ၊ လှိုင်သာယာ၊ ဒဂုံမြောက်၊ ဒဂုံတောင်၊ သာကေတ၊ အင်းစိန်အ စရှိသော ရန် ကုန်မြို့ပြင်ဘက်မြို့နယ်များတွင် အများအားဖြင့် ညနေမှောင်ရီပျိုးစမှ မနက်မိုးလင်းအထိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များစီး၍ သွားလာနေခြင်း၊ ဈေး ဝယ်ခြင်း၊ ဈေး ပို့ခြင်း၊ ကယ် ရီဆွဲခြင်းများကို ရပ်ကွက်နေသူအားလုံးကွင်းကွင်းမြင်နေရသည်။ အစီး ၃ဝဝ သာ ဖမ်းဆီးရမိသည်မှာ ဘယ်သူ့တာဝန်လဲ။
ဘိန်းဖြူ၊ မူးယစ်ဆေး၊ ဖဲဝိုင်း၊ လောင်းကစားကဲ့သို့ တိတ်ဆိတ် လျှို့ ဝှက်လုပ်၍ မရသော ထင်ပေါ်လှသည့် သွားလာနေသော ယာဉ်တစ်စီးရှိသည် ကို လမ်းမှူး၊ ၁ဝ အိမ်မှူး၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အားလုံးကောင်းကောင်း ကြီး သိကြပါ သည်။ ယာဉ်ထိန်းရဲက စောင့်ကြည့်၍ ဖမ်းဆီးရန်မလိုပါ။ မည်သည့် အိမ်တွင်ရှိသည်ကို သိသူများက မျက် ကွယ်ပြုထားခြင်း၊ မတားဆီးနိုင်ခြင်း၊ တစ်နည်း ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သူများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ က အမိန့် ညွှန်ကြား ချက်ထုတ်သော်လည်း ဂရုမစိုက်တော့ပါ။
တစ်နည်း တရားဥပဒေကို ရင် ဝယ်ပိုက် သားသမီးတစ်ဦးကဲ့ သို့ စောင့် ရှောက်လိုက်နာရမည့်သူများက မလိုက် နာတော့လျှင် မည်သို့သောအခါ သန့် ရှင်းသောအစိုးရ၊ တ ရားဥပဒေစိုးမိုး သော အစိုးရဖြစ်လာပါမည်နည်း။ လက်ဆောင်ပဏ္ဏာကိုသာ ယစ်မူး နေခြင်း၊ ဆွေမျိုး၊ ကိုယ့်လူမျက်နှာလိုက် အားပေးခြင်း၊ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် တာဝန် ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု မရှိခြင်းဟူသော နှစ် ၅ဝ လမ်းဟောင်းကြီးကို ဆက်လက် လျှောက် လှမ်းနေကြရင်တော့…ဟု သာ ကျွန်တော့်အတွေးကို ရပ်လိုက်ရ
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေဟာ ဥပဒေဘောင်လွန်နေတယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ သတိပေးချက်အပေါ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) က ဒီနေ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီး တရားဝင်ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့ အောင်ပင်လယ်ကွင်း လူထုဟောပြောပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တပ်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိန်ခေါ်ပြောကြားချက်ဟာ အခြေခံဥပဒေက ခွင့်ပြုထားတဲ့ဘောင်ကျော်လွန်နေ တယ်ဆိုပြီး မေလ ၂၂ ရက်နေ့က ကော်မရှင်က စာရေးသတိပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ ညီတဲ့အပြင် လူထုထုယုံကြည်အားကိုးပြီး ဂုဏ်သိက္ခာမြင့်မားတဲ့ တပ်မတော်ဖြစ်ရေး ရည်ရွယ်ကြောင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၀င်ရောက်သ တိပေးနေခြင်းဟာ လုံးဝသင့်လျော်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းအရွက်နှင့် ကြက်သွန်နီအခွံကဲ့သို့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် သစ်သီးအစိတ်အပိုင်းများတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိစေသောအရာများပါဝင်သည်ကို မသိကြသဖြင့် မကြာခဏစွန့်ပစ်လေ့ရှိကြသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၂ရက်မှာ စတင်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ကမာ့္ဘဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စုတွင်း သုံးသပ်ချက်တွေ နေ့တိုင်း တင်ဆက်ပေးနေရာမှာ ဒီနေ့တော့ အုပ်စု (စ) သုံးသပ်ချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဗိုလ်စွဲနိုင်တယ်လို့ ရေပန်းစားနေတဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းနဲ့အတူ ဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာမှ စတင် ကစားမယ့် ဘော့စနီးယား ဟာဇီကိုဘီးနား၊ အာရှက အီရန်နဲ့ အာဖရိကတိုက်က နိုင်ဂျီရီးယားအသင်း တို့ ဒီအုပ်စုမှာ ပါဝင်နေကြပါတယ်။
ချန်ပီယံအိပ်မက် မက်ခွင့်ရှိနေတဲ့ အာဂျင်တီးနားအသင်းအတွက် အုပ်စုချောင်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
အိုလံပစ်အားကစားဂျာနယ်အယ်ဒီတာ ကိုဟိန်းသန့်ကလည်း အာဂျင်တီးနား အုပ်စုတက်ဖို့ အခြေအနေအကောင်းဆုံးလို့ ပြောပါတယ်။
“ဒီအုပ်စုက အာဂျင်တီးနားအတွက် သိပ်မခက်ခဲတဲ့ အုပ်စုပါပဲ။ အီရန်ရော၊ ဘော့စနီးယားရော နှစ်သင်းလုံး။ ဘော့စနီးယားဆိုလည်း အခုမှ ခြေစစ်ပွဲအောင်လာတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်။ အီရန်ကလည်း အာရှတိုက်က အသင်းဆိုပေမယ့် အာဂျင်တီးနားကို မီနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ စောင့်ကြည့်ရမှာကတော့ နိုင်ဂျီးရီးယားတသင်းပဲရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ဂျီးရီးယားကလည်း ဒီနှစ် အပြောင်းအလဲတွေ များပြီးတော့ လူငယ်ကစားသမားတွေကို ပိုပြီး အားပြုထားတာများတော့ ဒီလေးသင်းထဲမှာ အခြေအနေ အကောင်းဆုံးကတော့ တောင်အမေရိက အခြေစိုက်အသင်းလည်းဖြစ်တဲ့၊ ဗိုလ်စွဲဖို့ ရေပန်းစားတဲ့ ဒုတိယနေရမှာရှိတဲ့ အာဂျင်တီးနားက အုပ်စုတက်ဖို့ အခြေအနေ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
လာမယ့်ဇွန်လ ၁၅ ရက်မှာ ဒီအုပ်စုက အာဂျင်တီးနားနဲ့ ဘော့စနီးယား၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်မှာ အီရန်နဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားတို့ ပွဲဦးထွက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရခိုင်တောင်ပိုင်းကို ဇွန်လ၀က်တွင် လျှပ်စစ်မီးပေးမည် (အသံဖိုင်ပါသည်)
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်း မြို့နယ်တွေကို မေလထဲမှာ မဟာဓာတ်အားလိုင်းက လျှပ်စစ်မီးပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့် လုပ်ငန်းတွေ မပြီးပြတ်လို့ အခုလ ဒုတိယပတ်မှာမှ ပေးနိုင်တော့မယ်လို့ သံတွဲခရိုင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဦးဇော်မြင့်က ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီတာခအမြင့်ဆုံး ပေးဆောင်ရတဲ့ ဒေသတခုဖြစ်တဲ့ ရခိုင်တောင်ပိုင်းက သံတွဲနဲ့ တောင်ကုတ်မြို့တွေကို မဟာဓာတ်အားလိုင်းက လျှပ်စစ်မီးပေးဖို့ စီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ အိန္ဒိယချေးငွေတွေနဲ့ ဆောင် ရွက်နေပြီး မြို့နယ်တွင်းသွယ်တန်းတာတွေနဲ့ တခြားလိုအပ်တာတွေ ကိုတော့ ပြည်နယ်အစိုးရ က ဆောင်ရွက်တာပါလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်က ပြောပါတယ်။
လာမယ့် သြဂုတ်လမှာ အမ်းမြို့နယ်ကို လျှပ်စစ်မီးပေးဖို့ စီစဉ်နေပြီး နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတော့ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ စစ်တွေ၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်မြို့တွေကို ပေးနိုင်မှာပါလို့ ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ သံတွဲနဲ့ တောင်ကုတ်မြို့တွေကို ပုဂ္ဂလိက ကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးနေပြီး ၁၀ ယူနစ်ထက်ပိုတဲ့ ယူနစ်တွေကို ငွေကျပ် ၄၅၀ လောက် ပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀န်တောင်မှုကောင်းပြီး မီးမပျက်ဘူးလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
သံတွဲခရိုင်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဦးဇော်မြင့်ကတော့ မဟာဓာတ်အားလိုင်းက လျှပ်စစ်မီး ပေးတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မီတာတွေကို ထပ်တပ်ပေးဖို့ လျှောက်လွှာလက်ခံနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ လျှောက်လွှာ ၁၀၀၀ လောက်လက်ခံရရှိထားပြီး ဘယ်လောက်ထိ ချပေးနိုင်မလဲတော့ မသိသေးဘူးလို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
မာရသွန်ပြိုင်ပွဲဝင် ၉၁ အရွယ် အမျိုးသမီး အမေရိကန်စံချိန်ချိုး
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန် ၁ ရက်နေ့က ကျင်းပတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ စန်တီယေဂိုမြို့ ရော့ခ်အင်ရိုး မာရသွန်ပွဲကို ၇ နာရီနဲ့ အပြီး ပန်းဝင်တဲ့အထိ ပြေးနိုင်တဲ့ အသက် ၉၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး ဟဲရိယတ် သွမ်ပဆင်ဟာ မာရသွန်ပြေးတဲ့ အသက်အကြီးဆုံး အမျိုးသမီး ဖြစ်ရုံမက သူအသက်အရွယ်ပိုင်းမှာ အမြန်ဆုံးပြေးတဲ့ အမေရိကန်စံချိ်န်ကိုလည်း ချိုးခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံ မီဒီယာက အစီရင်ခံပါတယ်။
၂၆ ဒသမ ၂ မိုင်ရှည်တဲ့ မာရသွန်ပွဲကို ပြေးနေစဉ် တခြား သက်ကြီး မာရသွန် အပြေးသမားတွေက ပန်းဝင်အောင် ပြေးနိုင်မယ် မထင်ဘူးလို့ ပြောခဲ့ကြပေမယ့် ပန်းဝင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မစ္စစ် သွန်ပဆင်က “မာရသွန်တ၀က်ရောက်ချိန် ၁၇ မိုင်လောက်မှာ ပြေးရ ခက်သထက် ခက်လာတယ်၊ တနေရာမှာတော့ ငါ လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာ မသေချာဘူးလို့တောင် တွေးမိတယ်။ ဒါပေမယ့် မိုင် ၂၀ ကို ရောက်လာချိန်မှာ ၂၀ ကနေ ၂၆ ကို ရေတွက်ရတာ ပျော်လာတယ်။ နောက်ဆုံးမိုင်က အပျော်ဆုံး ပြေးရတဲ့ အချိန်ပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
မစ္စစ်သွမ်ပဆင်က သူနဲ့ သူသူငယ်ချင်းတွေဟာ ကင်ဆာတိုက်ဖျက်ရေး ရန်ပုံငွေအတွက် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တည်းက စပြီး မာရသွန်ပွဲတွေမှာ ပြေးခဲ့တာလို့ ပြောပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်က လူကီးမီးယားနဲ့ လင်ဖိုးမားရောဂါ ခံစားနေရတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ရန်ပုံငွေရအောင် မြှင့်တင်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
မြောက်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ချားလော့တ်မြို့ဇာတိ မစ္စစ်သွမ်ပဆင်အတွက် ဒီမာရသွန်ဟာ သူပြေးခဲ့တဲ့ ၁၅ ကြိမ်မြောက် မာရသွန်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မာကြီးရှည်ရိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီကို ဘိုဖြူ ဘာ့ကြောင့် လျော်ကြေးတောင်းတာလဲ
ဒါရိုက်တာ မိုက်တီးရိုက်တဲ့ “မာကြီးရှည်” ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာ အဆိုတော် ဘိုဖြူရဲ့ အဖြူရောင်သံစဉ်ကို ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ သုံးထားပါတယ်။ အခုတော့ ဘိုဖြူက လပ်ကီးဆဲဗင်းကုမ္ပဏီကို မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေတစ်ဆင့် လျော်ကြေးတောင်းပါတော့မယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ဂီတသမားတွေ အခုလိုခံနေရတာ တော်တော်များနေပြီ။ ရုပ်ရှင်လည်းသိပ်မကြည့်တော့ ကိုယ့်သီချင်းတွေကို ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာလည်း မသိရဘူး။ ဒီသီချင်းကို အောင်ပန်းက ကျွန်တော့သူငယ်ချင်း သက်နိုင်ဦးက ရေးတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၆ခုနှစ်ကတည်းက တောင်ကြီးမှာ ဆိုခဲ့တယ်။ အောင်မြင်မှုလည်း ရခဲ့တယ်”လို့ အဆိုတော် ဘိုဖြူက ဇွန်လ ဆိုပါတယ်။
ဘိုဖြူရဲ့သီချင်းကို ခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ သုံးစွဲခဲ့တဲ့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံ ဂီတအစည်းအရုံးက ကိုဇော်ထူးအောင် (CMP)က အဆိုတော်နဲ့ ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးပေမယ့် ဂီတအနုပညာရှင်တွေဘက်က တောင်းဆိုတဲ့ နစ်နာကြေးကို မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ ရှင်းပြပါတယ်။
“ဒီသီချင်းက ဆင်ဆာထဲမှာ မပါဘူးလို့ ပြောတယ်။ အဲဒီအတွက် ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖွဲ့ကိုလည်း သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲဒီလောက်အထဲပဲ ပြောလို့ရဦးမယ်”လို့ ကိုဇော်ထူးအောင် (CMP) က ဆိုပါတယ်။
ဆင်ဆာအဖွဲ့ရဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်ရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဂီတအစည်းအရုံးအနေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေဘက်က လုပ်ဆောင်လိုတဲ့အရာတွေကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ ကိုဇော်ထူးအောင်က ဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ ။ (လပြည့်၊ Free Wings)
ဒေါ်လာ ၃၀၀ တန် ဖုန်းကို ဆယ်ရင်း အမေနဲ့သား အသက်ပျောက်သွား
ဖြစ်ရပ်က ငိုရခက် ရယ်ရခက်လေးပါ။ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းလေး တစ်ခုပါပဲ။ မိလ္လာတွင်းထဲ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ ဟန်းဆက် ကို ဆယ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း သား အမိ နှစ်ယောက် စလုံး တွင်းထဲမှာ သေဆုံးသွားတဲ့ သတင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေ ဖြစ်သူက အသစ် ဝယ်ထားတဲ့ ဟန်းဆက်ကို အိမ်သာတက်ရင်းနဲ့ သုံးပါ တယ်။ ကာလတန်ဖိုး အားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၀၀ ရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးနေရင်း ဖုန်းက တွင်းထဲ ကျသွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ သားဖြစ်သူကို က အခြား အပေါက် တစ်ခုကနေ ဝင်ဆယ် ပေးပါတယ်။ အထဲ ရောက်ပြီး မိနစ် ပိုင်း မှာပဲ မူးမေ့သွားပါတယ်။ မိလ္လာတွင်း အနက်က ဒူးခေါင်း အကျော်လေးပဲ ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနက်ကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ အမေ ဖြစ်သူပါ လိုက်ဆင်း ဆယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဝင်လိုက်တာ မိနစ်ပိုင်း အတွင်းပဲ မူးမေ့သွား ပြန်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးကို ခေါ်ပြီး ဆယ်ထုတ်တဲ့ အခါ အသက်မပါ တော့ တဲ့ သားအမိ အလောင်းကိုသာ ပြန်ရ ပါတယ်။ ဆေးရုံ ပို့ပေမယ့် မမှီတော့ ပါဘူး။ မိလ္လာတွင်းက အနံ့ဆိုး ကြောင့်၊ အောက်ဆီဂျင် ဓာတ် ချို့တဲ့မှု ကြောင့် အချိန်ပိုင်းအတွင်း မေ့မျော သေဆုံး သွားကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ ပါတယ်။